प्रदेश-३ – Page 274 – Halkaro
अवैध माटो ढुवानी गर्ने ट्राक्टर र जेसीबी नियन्त्रणमा
चितवन । जिल्लाको खैरहनी न.पा. वडा नं. ४ कंकाली डाँडा स्थित माटो उत्खनन् गरि अबैध रुपमा ओसार प्रसार गर्न प्रयोग भएका ट्रयाक्टर जेसीबीलार्इ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी विशेष टोलीले कंकाली डाँडामा माटो खन्न प्रयोग भएका निम्न दुर्इवटा जेसीबी र माटो लैजान प्रयोग भएका २३ वटा ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका […]
पोल्ट्री नीति नहुँदा कुखुरापालक किसान मर्कामा
चितवन । चितवनमा चाैँथाे राष्ट्रिय पोल्ट्री दिवस मनाईने भएको छ । पोल्ट्री दिवसमा कुखुराजन्य उत्पादनको कारोबार गर्नेहरुले प्रभातफेरी सहित चितवनमा विशेष समारोह सहित यो दिवस चौथो पटक मनाउन लागिएको हो । पोल्ट्रीको राजधानी भनेर चिनिने चितवनमा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्न सफल र मुलुकलाई कुखुराजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर विगत ३ बर्ष अगाडी देखि यसैदिन यो दिवस मनाउन […]
कैदी बन्दीलाई व्यवसायीक तालिम
चितवन । रोटरी क्लब अफ चितवन र स्पाउस क्लब अफ चितवन रोटरीको संयुक्त आयोजना भरतपुर कारागारमा ५ दिने क्रिष्टल बनाउने तालिम बिहीबार समापन भएको छ । भरतपुर कारागारमा रहेका महिला बन्दीहरुलाई जिबीकोपार्जनमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यले तालिम कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कारागार चितवनका प्रमुख कमल प्रसाद काफ्लेले महिला बन्दीहरुलाई सिप सकाउनु मात्र ठुलो कुरा […]
ट्राफिक प्रमुखलाई विदाई
चितवन । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनबाट सरुवा भएर जान लागेका प्रहरी निरीक्षक राजन भेटवालले आफ्नो १४ महिने कार्यकालको समीक्षा गरेका छन् । बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटका क्रममा भेटवालले चितवन रहदा गरेका र गर्नुपर्ने कामको बारेमा समीक्षा गरेका हुन् । आफू चितवनमा रहँदा भेटवालले चितवनमा विशेष गरि मादक पदार्थ सेवन […]
मंसिर सम्म ९७ लाख बक्यौता रकम उठ्यो
चितवन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्ममा ९७ लाख २५ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाएको छ । कार्यालयले लामो समयदेखि महसुल नबुझाउनेको ग्राहकको लाइन काट्न थालेपछि बक्यौता रकम असुली गरेको हो । लाइन काटिएका ग्राहकमध्ये ५०६ जना ग्राहकले बक्यौता रकम बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका […]
बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
चितवन । चितवनको बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आपुर्ती मन्त्रालयको टोलीले निर्देशन दिएको छ । अनुगमन प्रभावकारीता निरिक्षण र सरोकार वाला बिच छलफलका लागी देश दौडाहामा रहेको शाखा अधिकृतहरुको टोलीले चितवनका सरोकार वालाहरुसंग छलफल गरी बजार अनुगमन र कारबाहिको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो । शाखा अधिकृत त्रेय उर्मीला केसी, अम्बिका राई, सबिता अधिकारीले उपभोक्ता […]
युवा परिषद कुनै दलको होइन् सबै युवाको हो
प्रकाशित मिति : २०७३, १३ पुस बुधबार
चितवन । राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले युवा परिषद् कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नभएर सबै युवाहरुको साझा चौतारी भएको बताउनुभएको छ । बुधबार भरतपुरमा आयोजित मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीको छलफल कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै ढुंगेलले नेपालमा पहिलो पटक युवाहरुको लागि सरकारी नेतृत्वदायी संस्थाको रुपमा युवा परिषद् गठन गरिएको बताउनुभयो । धेरै पहिलेदेखि युवा […]
चितवनलाई उपभोक्ता मैत्री जिल्ला बनाउने योजना
प्रकाशित मिति : २०७३, १३ पुस बुधबार December 28, 2016
चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जिल्ला लाई आगामी ५ वर्ष भित्र देशकै नमुना र उपभोक्ता मैत्रि जिल्लाको रुपमा बिकास गर्ने योजना बनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्ट्को अध्यक्षतामा बसेको बजार अनुगमन सम्यन्त्रको बैठकले उपभोक्ताको हितलाई सर्वोपरि ठानी चितवनलाई देशकै नमुना बनाउने गरी काम अगाढी बढाउने कार्ययोजना बनेको छ । भेलाले खाद्ययान्न […]
बाघको आक्रमणबाट माडीमा एक घाइते
चितवन । बाघको आक्रमणबाट माडी ४ खैरहनीमा एक महिला घाइते भएकी छन् । बुधबार विहान नौ बजे घाँस काट्न नजिकैको करेसाबारीमा जाने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको हो । ५० वर्षिय सरस्वती तिवारी घाइते भएकी छन् । देब्रे कुम र हातमा गहिरो चोट लागेको उनका देवर इन्द्रप्रसाद तिवारीले जानकारि दिए । उनको हाल भरतपुर अस्पतालमा उपचार […]
चितवन शैक्षिक मेला सुरु
चितवन । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ विद्यार्थीहरुको विदेश मोहले देशलाई चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) चितवनको आयोजनामा आज (बुधबार)देखि भरतपुरमा सुरु भएको दोस्रो इक्यान शैक्षिक मेलाको समुद्घाटन गर्दै सचिव श्रेष्ठले पछिल्लो समय विदेश जाने फेशन जस्तै बनेकाले विद्यार्थीहरुलाई नेपालमै टिकाई राख्न चुनौती थपिएको बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षासंगै […]